Teleportation, bheji nyowani ye AMD yekuita kuti computum yakawanda ibudirire | Linux Vakapindwa muropa
Kwenguva yakareba uye semamwe makambani mazhinji eetekinoroji, AMD yanga ichiisa kuyedza kukuru kusunda iyo miganho yekomputa yekwiyamu nhasi uye rese basa rayo ratanga kubhadhara se munguva pfupi yapfuura kambani yakaisa chikumbiro chepamutemo umo maakaburitsa quantum computing processor yaizoshandisa teleportation.
Iyi nyowani patent tekinoroji inogona kugadzirisa kudzikama uye kushanda zvakanaka matambudziko yakatarisana neazvino masystem muquantum computing, kunyangwe zviri pachena kuti tekinoroji inogona kunge iri kure nekutengesa, asi iyi patent application inoratidza kufarira kwe AMD mune ramangwana.
Uye ndizvozvo panguva ino pane zvipingamupinyi zviviri zvikuru mira munzira yehuwandu hwehuwandu uye hukuru hwehukuru hwehukuru: scalability uye kugadzikana. Quantum nyika dzakasarudzika nyaya, dzakapfava zvekuti dzinogona kukanganisika nekadiki kudenha, uyezve, kunzwisiswa kweiyo quantum system inowedzera kuwedzera nekuvapo kweakawanda ma qubits mune yakapihwa system. Nekudaro, timu yevaongorori ve AMD yaisa chikumbiro patent chakanangana neyakajeka uye yakavimbika yehuwandu hwekomputa dhizaini, nekutenda kune yakajairwa yakawanda-SIMD (Imwe Yekudzidzisa Akawanda Dhata) nzira.
Sekureva kwevaongorori, Kana AMD ikawana mukana wekukwikwidza muhuwandu hwecomputer, iyo mukana wekubatsira unenge usina muganho. CEO we AMD Lisa Lisa akamutsidzira uyu chip mugadziri uye akaisa tsika yehunyanzvi iyo yaendesa AMD kusvika ku3,200% kubva zvavatora hutungamiriri hwekambani muna 2014. Maererano nechikumbiro chakapihwa nevatsvakurudzi kubva kukambani, AMD iri kuongorora system inovavarira kushandisa quantum teleportation kuwedzera kuvimbika kweiyo quantum system, nepo panguva imwe chete ichideredza huwandu hwezvikwata zvinodikanwa kune yakapihwa kuverenga.
Chinangwa ndechekuderedza matambudziko ezero uye zvikanganiso zvekuverenga nekuda kwe kusagadzikana kwesisitimu:
Patent ye AMD, inonzi "Advance Teleportation yeReliable Computing pane Multi-SIMD Quantum processor," inovavarira kugadzirisa kugadzikana, scalability uye mashandiro ehuwandu hwekomputa masystem munzira nyowani uye dzinoshanda. Iyo kambani inotsanangura huwandu hwezvivakwa zvinoenderana nehuwandu hwekugadzirisa matunhu - nzvimbo dzechipu dzine kana dzinogona kunge dziine makubiti, dzakamirira nguva yavo mupombi yekugadzirisa.
Muchokwadi, dhizaini ye AMD, nepo ichikodzera sainzi fungidziro, inotarisira teleport qubits kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe, nokudaro kubvumidza mitoro yebasa iyo mune dzidziso yaizoda kuurayiwa kuti iratidzwe neyekunze-kwehungwaru uzivi, sezvo kuurayiwa zvakateerana kune kutsamira pakati pemurairidzo mumwe neinotevera, zvinoreva kuti mutoro webasa unofanirwa kugadziriswa zvakateedzana. Matanho anotevera anoenderana nekugadziriswa kwakakwana kweiyo nhanho yapfuura uye nekuziva mhedzisiro yadzo chip isati yaenderera nekuverenga.
Naizvozvo, zvimwe zvezvipenga zvechip (mune iyi kesi, ma qubits) anoramba asina basa kudzamara yave nguva yekuita inotevera computational nhanho. Mukupesana, kunze-kwe-kurongeka kuuraya kunoongorora rimwe basa, kunoona kuti ndezvipi zvikamu zvinoenderana nemhedzisiro uye izvo zvisingaite, uye kuita nhanho yega yekuzivisa iyo isingade mhedzisiro yapfuura, nokudaro ichivandudza mashandiro ekutenda nekufanana kukuru.
Iyo AMD patent zvakare inosanganisira yakasanganiswa 'yekutarisa-kumberi' processor mumapurani, basa rekuongorora kuwanda kwebasa rekuita, fungidzira matanho api anogona kugadziriswa zvakafanana (uye asingakwanise) uye nemazvo kugovera iro basa mukati mezvikwata, uchishandisa quantum teleportation kuvaendesa kunzvimbo inodiwa yekugadzirisa SIMD dunhu. Maitirwo akaita iyi quantum teleportation haina kutsanangurwa mupatent.
Parizvino, makambani matatu chete akaonekwa mumusika wemakompiyamu wehuwandu: IBM, Intel, neGoogle. Iyi patent application inoratidza kuti AMD haina chinangwa chekusiya iyi ndima uye iri kushandawo kugadzira matekinoroji ayo ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Teleportation, bheji nyowani ye AMD kuita kuti computum yakawanda inyatsoshanda
Docker Desktop haichazove yemahara kumabhizinesi uye ikozvino ichagadziriswa pasi pekunyorera kwemwedzi